Qorayaasha Irish si ay ugu dabaaldegaan Saint Patrick. Weedho la xushay | Suugaanta hadda jirta
Qorayaasha Irish si ay ugu dabaaldegaan Saint Patrick. Weedho la xushay
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Qorayaasha
fekradeed xus maanta St. Patrick, xisbigiisa ugu caansan iyo kan caalamiga ah, ee ku baahsan adduunka oo dhan, adduunyo hadda ka go'ay cadow aan la arki karin. Marka waxaan ku biirayaa dabaaldegyada - iyo codsiyada la hubo ee loo jeedinayo qofka quduuska ah si loo gacan siiyo - iyadoo la soo uruurinayo oraahda qorayaasha ugu muhiimsan qaarkood irish. Laga soo bilaabo Classics sida James Joyce, Oscar Wilde ama George Bernard Shaw, isagoo maraya Bram Stoker, Samuu'eel Beckett ama Iris Murdoch. Iyo in la soo afjaro facyo badan sida John Banville iyo codad cusub sida Tana Faransiiska ama Maryan Furayaasha.
1 James farxad
6 Elizabeth foorari
12 Tana Faransiis
Rabitaanku wuxuu nagu kallifaa inaan lahaanno, si aan wax ugu dhaqaaqno.
Khaladaadku waa marinno daah furitaan.
Aafada gabowgu maahan inaad gabowday, laakiin inaad dhalinyaro tahay.
Waxa ugu yar ee adduunkani ku nool yahay. Dadka badankood way jiraan, intaas waa intaas.
Bini'aadamku waa xayawaanka kaliya ee aan gebi ahaanba iyo runtii ka baqayo.
Qalbiga nin reer Irish ah waa wax aan ka badnayn male-awaalkiisa.
Suugaantu waa shayga ugu fiican ilaahay ka dib.
Qorayaashu runtii waxay ku nool yihiin maskaxda iyo hudheelada nafta.
Haddii daa'in la fahmo, ma aha muddo aan dhammaad lahayn, laakiin maqnaanshaha waqtiga, qofka hadda ku nool weligiis buu sii noolaanayaa.
Qoraalku waa sidii guurka oo kale. Qofku waa inuusan waligiis ballan qaadin ilaa uu qofku layaabo nasiibkiisa.
Masayrku ma aha wax kale oo aan ka ahayn inaad dareento kali kali cadowga dhoola cadeynaya.
Ireland waa wadan weyn oo dhinta ama la guursado.
Tagtadii hore waxay igu garaacday sida qalbi labaad.
Suugaantu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee aadamuhu ikhtiraacay waana mid ka mid ah noocyada ugu fiican fanka.
Saxnimada siyaasaddu waa goob miino lagu aaso.
Waa maxay noloshu laakiin daqiiqadaha farxadeed ee sii socoshada ku xardhan silsilad quus ah?
Waxaan ka gudbey badweynta waqtiga si aan kuu helo.
Sidaas ayay xusuustu ku ciyaareysaa kaftankeeda, xumaan iyo samaanba, si ay u keento raaxo ama xanuun, ladnaan ama dhibaato. Tani waa ta ka dhigaysa nolosha macaan iyo qadhaadh isla waqti isku mid ah, wixii la ina siiyayna waxay noqonayaan daa'in
Dembiga kaliya waa dembiga dhalashada.
Dunida ayaad joogtaa. Taas dawo ma leh.
Khamrigu afka ayuu galaa jacaylkuna indhaha ayuu ka galaa; tani waa waxa kaliya ee aan ognahay intaanan gaboobin oo aan dhiman. Marka waxaan u keenayaa muraayadda afkayga, waanan ku eegayaa adiga, oo taahayaa.
Si tartiib tartiib ah u talaabo maxaa yeelay waxaad ku talaabsaneysaa riyadeyda.
Aabbahay mar buu ii sheegay in waxa ugu muhiimsan ee ninku ogaadaa ay tahay sababta uu u dhiman doono.
Dadkii aad ku taqaanay dhalinyaro ahaan, kuwii arkay timahaaga ugu doqonimada badan iyo waxyaalihii ugu xishoodka badnaa ee aad waligaa sameysay, welina ku daneynaya intaas ka dib intaas oo dhan - waa kuwo aan la bedeli karin, ma ogtahay?
Mid ka mid ah waxyaabaha aan u maleynayo inay tahay inuu noqdo iskuul qoris ayaa dadka ka niyad jabisa inta ay qorayaan, runtiina waan aaminsanahay oo dhahayaa.
Waxaan aaminsanahay in jiil kasta iyo waddan kasta ay jiraan tiro yar oo qorayaal wanaagsan ah. Waxaa laga yaabaa in hal ama labo ka mid ah jiilkeyga, mana u maleynayo in koorsooyinka qorista hal abuurka ay kor u qaadayaan soo bixitaanka codadkaas, ama looga hortagayo inay soo baxaan.
Dhabarkaagu waa xeeb bari oo adag gacmahaaga iyo lugahaaguna waxay ka dheeraanayaan buurahaaga tartiib tartiib ah.
Dhulkii aan dhegahayaga ku dhejin jirnay muddo dheer waa mid maqaar saar ah ama aad u xeel dheer, oo caloosha waxaa ku duufsada astaan ​​xun. Jasiiradeena waxaa ka buuxa sawaxan aan raaxo lahayn.
Jacayl naxariis daran, jacayl dhagar qaba ayaa noloshayda ku soo duulay. Jacaylku wuxuu dalbadaa allabaryo. Iyo allabaryada dhiiggu wuxuu ku socdaa.
Waxaad igu xukumi doontaa mid naxariis daran iyo daneyste, mid aad u daneyste ah, laakiin xusuusnow in jacaylku had iyo jeer sidan yahay. Markuu hamigu sii weynaado, ayaa danaysi badan uu noqdaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Suugaanta hadda jirta » Suugaanta » Qorayaasha » Qorayaasha Irish si ay ugu dabaaldegaan Saint Patrick. Weedho la xushay
Dadka la odhan jiray Quintero dijo
Weedha ah, "Waxaan ka gudbay badaha waqtiga si aan kuu helo," ma aha Bram Stoker, kama muuqato buugga. Waxaa leh filimka Francis Ford Coppola.
Jawaab Les Quintero
Riwaayadaha Calderón de la Barca
Buugaagta Juan Gómez-Jurado